Ebe a na-enweta ihe osise na saịtị nsonaazụ vidiyo
Saịtị Ahịa Ahịa: Mmetụta, Obere vidiyo, na Ihe ngosi
Tọzdee, Disemba 24, 2020 Saturday, April 10, 2021 Douglas Karr
B-mpịakọta, eserese ngwaahịa, eserese akụkọ, egwu, vidiyo vidio, ntụgharị, eserese, eserese 3D, vidiyo 3D, vidiyo ndebiri vidiyo, nsonaazụ ụda, nsonaazụ vidiyo, yana ọbụna ndebiri vidiyo zuru ezu maka vidiyo gị ọzọ enwere ike zụta n'ịntanetị. Ka ị na-achọ imeziwanye mmepe vidiyo gị, nchịkọta ndị a nwere ike meziwanye mmepụta vidiyo gị ma mee vidiyo gị ka ọ bụrụ ọkachamara karịa na obere oge.
Y’oburu n’inwe ihe omuma nke oma, inwere ike ichota izu ahia. Offọdụ n'ime ihe ngosi ahụ, dịka ọmụmaatụ, jiri ntuziaka dị ịtụnanya banyere etu esi edezi vidiyo, dochie, akara ngosi, gbanwee ederede, wdg na-enweghị ọkachamara ọkachamara.
Nke a bụ nnukwu ihe atụ. Lelee nke a Mpempe Whiteboard site na Videohive - ị nwere ike iji ihe niile dị iche iche emere tupu ị nwee ike itinyekọ vidiyo nke gị!
Ma ọ bụ ị pụrụ iji hapụ a mara mma video ke Mgbe mmetụta banyere ọhụrụ gị iPhone ngwa. Nanị ịzụta ihe iPhone Katalọgụ si BlueFX ma pụọ!
Enwere saịtị ole na ole ị nwere ike iji mee ihe ga-achọ ihe ntanetị 50 na ntanetị niile na Internetntanetị. Lelee Agekwụ Foot.net.
Saịtị Ihe Nkiri Foto Stock Video
Nke a bụ ndepụta nke nnukwu akụ maka ịchọta vidiyo vidiyo na-enweghị ego maka ọrụ ọzọ ị ga-arụ. Saịtị m na-eji ọtụtụ n'ihi ọtụtụ ụdị na ọnụ ala dị ala bụ Depositphotos. Ọ bụrụ na ịchọọ na vidiyo na mpaghara ọchụchọ, nsonaazụ ya ga-abụ vidiyo. Ma ọ bụ, ị nwere ike họrọ video si ha search dropdown.
Gaa Leta Depositphotos
123RF - HD ngwaahịa eserese na vidiyo
Adobe Stock - Weta echiche gị kachasị mma na nke kacha mma na eserese ngwaahịa.
Afọ Fotostock - eze na-akwụghị ụgwọ ma na-achịkwa ikikere vidiyo.
Alamy - N'ime ihe karịrị nde 55 dị elu, ihe osise ngwaahịa na vidiyo
Clipcanvas.com - Ego ikikere otu oge, ebighi-ebi Jiri, ụwa niile, mgbasa ozi ọ bụla, usoro ọ bụla, ọtụtụ nbudata
Mmegharị Corbis - ihe okike di elu na nke editọ nke a na-emelite kwa oge
Depositphotos - Onye nkwado nke Martech Zone!
Dijitalụ - nbudata vidiyo na nbudata vidio.
Igbari - Ihe onyonyo HD maka onye nlere ihe nlere nke ugbua
iStockphoto - Chọọ maka ngwaahịa vidiyo
Ederede - Ihe eserese eserese na eserese sitere na Asia
Ihe nkiri - 2D na animation animation kpamkpam n'efu, ụzọ atọ na ihe ndị ọzọ
Plixs - choo otutu puku onyonyo onyonyo efu na vidiyo vidio na ikikere CC0.
Pond5 - ahịa ahịa ahịa
Ntughari - ihe onyonyo vidiyo vidiyo bara uru, mgbe oru ngo gachara, egwu na nsonaazụ ụda
Shutterstock - vidiyo vidiyo na-enweghị eze
Ihe Ndekọ Ngwaahịa - vidiyo vidiyo dị elu dị elu nke nwere ikike na ikike ikikere nwere ikike. A na-enweta ihe nkiri Ultra HD iji budata na 1080p.
Akụkọ na-egbochi - ndenye aha na-adabere na ndenye maka nbudata ihe osise ngwaahịa na-enweghị eze, mmegharị esemokwu, After Templates ndebiri na ndị ọzọ
Videohive - faịlị vidiyo vidiyo nke eze
Vimeo - Ntinye pụrụ iche, vidiyo na-enweghị eze, nke ndị editọ Vimeo dere.
YayImage vidiyo - N'ime 250,000 HD na 4K vidiyo vidiyo a na-akwụ ụgwọ ọnụ.
Ma ọ bụrụ na ị ga-amasị ụfọdụ classic eserese, lelee Nchịkọta Ihe Nlekọta Internetntanetị!
Mara: Anyị nwere ụfọdụ njikọ mmekọ na post a!
Tags: 123RFadobeAdobe ngwaahịamgbe emetụta yamgbe mmetụta ndebiriAfọ FotostockalamyUsoro ọ bụlaọ bụla mgbasa ozib-mpịakọtaGbanyụọ BBC MotionbluefxObere vidiyoMmegharị CorbisDijitalụIgbarifootageọchụchọ esereseFramepooleserese ngwaahịa n'efunweta onweiMovieNchịkọta Ihe Nlekọta InternetntanetịistockphotoVidio Ahịan'okirikiri esemokwummeghari iheIhe nkiriọtụtụ nbudataEgo ikikere otu ogemgbe nile JiriPond5Ntughariikikeeze n'efuShutterstockna-aga aga agaIhe Ndekọ Ngwaahịavidiyo vidiyongwaahịa vidiyoakụkọ na-egbochintụgharịIhe Ngosi vidiyovidiyo vidiyovidiyo vidiyovideo ikwu n'ụzọVideohivengwaahịablanboardn'ụwa
Jenụwarị 9, 2014 na 12:02 PM
Daalụ maka ịkpọtụrụ ya, Douglas! Enwere ọtụtụ ekele.
Aug 18, 2014 na 11:20 PM
Daalụ maka itinye MotionElements maka ndepụta a zuru oke nke ahịa Ahịa Media.
Gbalia ileta ma nwalee VisualSearch ohuru na adaba gi iji chota idinaya ozigbo.